ओलीले छाने कर्णालीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार, नामसहित ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
ओलीले छाने कर्णालीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार, नामसहित !
नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि तीन जना उम्मेदवार चयन गरेको छ। राष्ट्रियसभा चुनावका लागि जुम्लाकी गंगा महत, सुर्खेतका चुडामणि शर्मा र दैलेखका पदम माझी उम्मेदवार चयन गरेको हो।
राष्ट्रियसभाका लागि ९ जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेका मध्येबाट दुई जना र अल्पसंख्यकबाट माझीलाई उम्मेदवार चयन गरिएको एमालेका कर्णाली प्रदेश इन्चाज यामलाल कँडेलले बताए।
राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेका कालिकोटका जीवन बुढा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमका ठगेन्द्रप्रकाश पुरी एकीकृत समाजवादी र हुम्लाका कविता वोगटी एमाले फागुन १८ पदावधि सकिदैँ छ। अन्य राजनीतिक दलहरुले अहिले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउनका सकेका छैनन्।
कर्णालीमा कस्तो छ मतभार: राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कर्णालीमा मतभारका हिसावले सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी केन्द्रमा रहेको छ। एमाले दाेस्राे , नेपाली कांग्रेस तेस्राे दल, नेकपा एकीकृत समाजवादी चौथो र रापप्रा नेपाल पाँचौँ दलका रुपमा रहेको छन्।
माओवादी केन्द्रका स्थानीय तहमा ५२ पदाधिकारी छन्। उनीहरूको मतभार ९३६ र प्रदेश सांसद १२ जनाको ५७६ मतभार गरेर कुल १५१२ मतभार छ। एमालेकासँग प्रदेश सांसद १३ जना छन्।
उनीहरुको मतभार ६२४ र ४५ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार ८१० रहेको छ। एमालेसँग कुल मतभार १४३४ रहेको छ। नेपाली कांग्रेससँग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार ७२० र ६ जना प्रदेश सांसदको २८८ मतभार छ।
कांग्रेससँग कुल मतभार १००८ मत छ। कर्णालीमा एकीकृत समाजवादीका तीन जना प्रदेश सांसद छन् भने स्थानीय तहका १३ जना जनप्रतिनिधि छन्। प्रदेश सांसदको मतभार एक जना बराबर ४८ हुन्छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको एक जना बराबर १८ हुन्छ। तीन जना प्रदेश सांसदको मतभार १४४ र १३ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार २३४ जोड्दा ३७८ रहेको छ।
तेस्तै, नेकपा एमाले महोत्तरीको जिल्ला अधिवेशन सरेको छ। २३ पुसमा एकैपटक जिल्ला अधिवेशन तय भए पनि महोत्तरीमा भने तयारी नपुग्ने भन्दै ५-६ माघका लागि सारिएको हो।
६ पालिकामा अझै अधिवेशन हुन नसकेकाले जिल्ला अधिवेशन सारिएको केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर बलाम्पाकी मगरले जानकारी दिए । क्षेत्र नम्बर १ र ३ मा सम्पन्न भए पनि २ र ४ मा विवाद कायमै रहेको एमाले महोत्तरीका सचिव सीताराम झाले जानकारी दिए ।
नेतृत्वका लागि आकांक्षी धेरै भएकाले सहमतिको प्रयास गरिएको छ। प्रतिनिधि चयनमा पनि आफूखुसी निर्णय लिएको भन्दै अहिले पनि एमालेभित्र ठूलो विवाद छ। एकता प्रक्रियाबाट आएका पूर्व माओवादीले आफूखुसी निर्णय लिएको संस्थापन पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ।
एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित टेकबहादुर बलाम्पाकी, जनप्रतिनिधि तथा वडाध्यक्ष फाल्गुन सुस्लिङ्ग मगर पूर्वमाओवादी हुन्। जिल्ला अधिवेशनमा पनि रस्साकस्सी हुने देखिएको छ।
महाअधिवेशन प्रतिनिधिमा असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला अधिवेशनमा पनि आफूखुसी गरे एमाले महोत्तरीमा थप विवाद बढनसक्ने र अर्को पक्षले फाइदा लिने जिल्लाका कतिपय नेताको आँकलन छ।
जिल्ला पाटीभित्रको विवाद समाधानका लागि जिल्लास्थित नेताहरुले केन्द्रीय सदस्य तथा पोलुटब्युरो सदस्य रामदयाल मण्डललाई अगाडि सारेका छन्। यसमा सहमति हुन् भने बाकि छ।